Wondershare Photo Recovery Review - Best Photo Recovery Review
Page bụghị Hụrụ | Wondershare
Ndi ị na-agbalị Ịchọ?
All Wondershare Content
Hot Searches: tọghata Video, Naghachi iPhone, Dezie PDF
Ngwọta Gị Nsogbu bụ Clicks n'Ebe:
N'ihi na iPhone
N'ihi na iPad
N'ihi na iPod
N'ihi na android ekwentị
N'ihi na PDF
N'ihi na Data Nche
N'ihi na DVD
N'ihi na Audio na Music
N'ihi na iTunes
Tọghata video ka dakọtara formats maka ihe ọ bụla ngwaọrụ
Ihe karịrị a Ntụgharị - Ụka, dezie, welie, download, ọkụ, hazie, kpọọ, na-ekiri na n'elu 150 formats.
Gbalịa Video Converter Ultimate>
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ data on iPhone
A zuru ngwọta naghachi ehichapụ kọntaktị, ozi, foto, ndetu, wdg si iPhone, iPad na iPod aka.
Gbalịa Dr.Fone maka iOS>
Nyefee ọdịnaya ke ochie ekwentị ọhụrụ otu
Ihichapu onwe data tupu inye pụọ ochie iPhone
Jikwaa Android ekwentị na mbadamba
Onye-nkwụsị ngwọta na-ahapụ gị jikwaa gị dum mobile ndụ adaba.
Na-azụ furu efu ma ọ bụ ehichapụ data on Android
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ kọntaktị, ozi ederede, photos, WhatsApp ozi, ọdịyo faịlụ, videos, akwụkwọ na ndị ọzọ.
Gbalịa Dr.Fone for Android>
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ data na kọmputa
Naghachi faịlụ na 550+ formats site na kọmputa gị nchekwa ngwa ngwa, n'enweghị kpam.
Gbalịa Data Recovery>
Ị nwere ike mkpa:
Download video si Youtube na-ọzọ 1000+ video nkekọrịta saịtị dị ka Dailymotion, Vimeo on Windows maka offline ohere ma ọ bụ playback na mkpanaka gị na ngwaọrụ.
Tọghata videos ka iPhone format
Nyefee data si gam akporo ka iPhone, ma ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu
Nyefee music on iPhone azụ iTunes
Detuo music, listi ọkpụkpọ, videos si iPod, iPhone & iPad ka iTunes Library, gị na PC maka ndabere.
Ehichapụkwa anya mmiri onwe data on iPhone
Hazie iPhone ụdaolu
A ezigbo oge dijitalụ audio edekọ na dere ọ bụla ọdịyo isi iyi ahụ na-akpaghị aka achọpụtala na kọmputa gị.
Gbalịa Streaming Audio Recorder>
Were ezigbo oge pụrụ iche-mmetụta foto / video na iPhone
Weghara photos na igba video na ezigbo oge mmetụta.
Gbalịa PowerCam for iOS / Android>
iPhone Best ukwu
Dr.Fone Maka iOS - Naghachi data si iPhone.
MobileTrans - Nyefee ọdịnaya n'etiti iPhone, Android, blackberry na Nokia igwe.
TunesGo - TunesGo-eme gị music, na-eme ihe iTunes ike.
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ data on iPad
Tọghata videos na-ekiri na iPad
Bufee ọdịnaya n'etiti iPad na ngwaọrụ ndị ọzọ
Jikwaa ihe niile na iPad kpamkpam na-enweghị iTunes
Ihichapu onwe onye data on iPad
Dr.Fone Maka iOS - Naghachi data si iPad.
MobileTrans - Nyefee ọdịnaya n'etiti iPad, Android, blackberry na Nokia igwe.
TunesGo - Jikwaa Ihe niile na gị iPad.
Naghachi furu efu data on iPod
Hazie gị dum music collection
Ebuli gị iTunes na obodo music n'ọbá akwụkwọ na nanị otu click. Chọta efu ozi maka gị music na batches.
Nyefee music n'etiti iPod na ngwaọrụ ndị ọzọ
Nyefee music on iPod azụ iTunes
Record online gụgharia music ka MP3
TunesGo - Jikwaa Ihe niile na gị iPhone.
Jikwaa ihe niile na Android ekwentị na mbadamba
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ data on Android
Tọghata ma nyefee videos ka Android
Nyefee data si iPhone ka Android, ma ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu
Nyefee na nkwado ndabere data na gam akporo na kọmputa
Zọpụta ma na-ekiri online videos on Android enweghị internet
Otu nkwụsị center na-enwe video na gị Android ngwaọrụ ọ bụla n'oge ọ bụla.
Gbalịa Player maka Android>
Were foto égbè video na ezigbo oge pụrụ iche utịp
Ukwu Save maka Android
MobileGo - Otu na-akwụsị ngwọta na-ahapụ gị jikwaa gị dum mobile ndụ adaba.
Dr.Fone for Android - Naghachi furu efu kọntaktị, ozi ederede, eserese, vidiyo, ọdịyo faịlụ, akwụkwọ
Dezie PDF akwụkwọ dị ka Okwu
Gị niile-na-otu PDF ngwọta. Mepụta, dezie, tọghata, annotate, chebe, jikota, watermark, mpikota onu, na banye ụlọ ọrụ ọkọlọtọ PDF faịlụ.
Tọghata n'etiti PDF na dị iche iche akwụkwọ formats
Tọghata PDF faịlụ ka otutu ewu ewu akwụkwọ formats, gụnyere Microsoft Okwu, Excel, PowerPoint, na ndị ọzọ.
Gbalịa PDF Converter Pro>
Wepụ ohere paswọọdụ na PDF faịlụ
Wepụ paswọọdụ echebe na PDF Iṅomi, edezi na-ebi akwụkwọ, na-eme ya free iji PDF faịlụ.
Gbalịa PDF Password Remover>
Tọghata PDF ka Okwu
Tọghata PDF ka n'ụzọ zuru ezu editable Microsoft Okwu akwụkwọ mgbe na-echebekwa ndị mbụ PDF formatting na okirikiri nhọrọ ukwuu.
Gbalịa PDF to Word Converter>
Tọghata PDF ka EPUB
Tọghata PDF eBooks ka EPUB format maka ịgụ na ngwaọrụ, dị ka iPad, iPhone, na iPod aka, na ọ laa.
Gbalịa PDF to EPUB Converter>
Tọghata PDF ka PowerPoint
Tọghata PDF slides azụ PowerPoint ngosi faịlụ na mbụ okirikiri nhọrọ ukwuu na formatting ukwuu chekwara.
Gbalịa PDF to PowerPoint Converter>
Tọghata PDF ka Excel
Tọghata PDF ka Excel spreadsheets n'ụzọ ziri ezi, na-eme ya nnọọ mfe n'ihi na ọrụ iwerekwa data na Microsoft Excel.
Gbalịa PDF to Excel Converter>
Zụta ugbu a Free Trial
Naghachi ehichapụ / formatted / keerughi data na kọmputa
Na-azụ furu efu photos, video na ọdịyo faịlụ na kọmputa
A ọkachamara ngwá ọrụ akpan iji naghachi photos, vidiyo na ọdịyo faịlụ site na nchekwa ngwaọrụ.
Gbalịa Photo Recovery>
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ data on iOS ngwaọrụ
Naghachi furu efu data on Android
Ihichapu onwe data on iPhone tupu reselling
Tọghata videos zuru okè formats maka ngwaọrụ
Ịgbanwe nkịtị n'ụlọ videos n'ime nkiri akụkọ
Cut, dezie, jikota, na ewepụtụ Obere vidiyo. Tinye music na ederede. Mee pụrụ iche utịp. Get a ọkachamara-na-achọ nkiri na nkeji.
Ọkụ n'ụlọ video n'ime ahaziri DVD
Ọkụ gị videos, audios na ihe oyiyi ike DVD na enyemaka nke a mfe iji ma dị ike DVD Okike. DVD Creator Bụ ugbu a n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 10.
Gbalịa DVD Creator>
Mee DVD ngosi mmịfe site n'ụlọ videos na ezinụlọ photos
Kasịnụ software ikpa foto gị na obere vidiyo n'ime a pụtara DVD ngosi mmịfe na-eso ndị enyi gị. DVD ngosi mmịfe Nrụpụta bụ ugbu a n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 10.
Gbalịa DVD Slideshow Builder Deluxe>
Easy n'ụlọ nkiri Ndinam na 1-2-3
Kensinammuo nkiri na-eme software na-enye gị ohere-abụ ihe na na gị onwe gị collection nke foto na vidiyo.
Gbalịa Fantashow 3.0.0>
Download online videos si YouTube na ndị ọzọ na video saịtị
Play videos ọ bụla video formats maka FREE
A ike mgbasa ozi ọkpụkpọ na-ahapụ gị ụtọ niile video formats na a nkiri-dị ka ọnọdụ. Amalite ngwa ngwa na mụ seamsless ikpeazụ idaha.
Best Multimedia ukwu
Video Converter Ultimate - Gị zuru ezu video toolbox.
Video Editor - Get a ọkachamara-na-achọ nkiri na nkeji.
Ọkụ vidiyo na DVD
Tọghata videos / foto DVD ngosi mmịfe
Tọghata DVD ọ bụla video formats
Tọghata PPT ka DVD video
Ọkụ gị PowerPoint ngosi ka DVD ma ọ bụ tọghata gị PowerPoint ngosi mmịfe ka video maka mfe òkè.
Gbalịa PPT2DVD Pro>
Tọghata ọdịyo na dị iche iche formats
Zọpụta online redio ma ọ bụ enuba music ka mp3
Idozi efu song Ama nke music collections
Wepụ mbụ audio track si video clip
$29.00 $ 19.00
Wughachi iTunes n'ọbá akwụkwọ si ọkọ
Mgbake furu efu iPhone data si iTunes backups
Na nkwado ma weghachite iTunes
Idozi efu song Ama iTunes n'ọbá akwụkwọ
Nyefee iTunes ndabere data Android ekwentị
Wondershare TunesGo Ochie
Jiri a zuru ezu niile-na-otu video toolbox iji tọghata, dezie, welie, download, ọkụ, hazie, kpọọ, ma kpọọ ihe ọ bụla videos na gị Mac.
Gbalịa Video Converter Ultimate for Mac>
Naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ kọntaktị, ozi, foto, ndetu, wdg si iPhone, iPad na iPod aka maka Mac ọrụ.
Gbalịa Dr.Fone maka iOS (Mac)>
Nyefee n'elu niile nke gị data - gụnyere kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, photos, music, videos na ngwa - na-adịghị ize ndụ ma ọ bụ ọnwụ nke àgwà.
Gbalịa MobileTrans maka Mac>
Mfe ndabere Android data & Jikwaa gị mgbasa ozi faịlụ, kọntaktị, ozi ederede na ngwa ọdịnala na Mac!
Gbalịa MobileGo for Android Pro (Mac)>
4 ụdịdị naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ faịlụ site na Mac ngwa ngwa, n'enweghị nsogbu na juputara.
Gbalịa Data Recovery for Mac>
Ọ bụ kpam kpam free YouTube Downloader maka Mac ka ibudata na kpọọ YouTube vidiyo na Mac.
Full nnwere onwe nyefee music na listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPad na iPod ka iTunes Library on Mac. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 9, ma na-akwado iPhone 6 & iPhone 6 Plus Gbalịa TunesGo Ochie (Mac)>
Dr.Fone Maka iOS (Mac) - Naghachi data si iPhone.
TunesGo maka Mac - Nyefee ọdịnaya n'etiti iPhone, Android, blackberry na Nokia igwe.
Video Converter Ultimate for Mac - Gị zuru ezu video toolbox.
iPad Best ukwu
Dr.Fone Maka iOS (Mac) - Naghachi data si iPhone / iPad.
TunesGo maka Mac - Nyefee ọdịnaya n'etiti iPad, Android, blackberry na Nokia igwe.
 Naghachi furu efu data on iPod
Zuru okè iTunes enyi iji hazie gị niile music collections. Chọta efu ọmụma, album artwork na lyrics mfe.
Gbalịa TidyMyMusic maka Mac>
Record audio ọ bụla na nkwanye audio isi mmalite, gụnyere web videos, na redio ụgbọ, na-ewu ewu weebụsaịtị ka YouTube, Pandora, na ndị ọzọ.
Gbalịa AllMyMusic for Mac>
iPod Best ukwu
Dr.Fone Maka iOS (Mac) - Naghachi data si iPhone / iPod.
TunesGo maka Mac - Nyefee ọdịnaya n'etiti iPod, Android, blackberry na Nokia igwe.
A ọkachamara PDF edezi ngwá ọrụ maka ọrụ dezie na tọghata scanned PDF na-eduga-onu OCR technology.
Gbalịa PDFelement maka Mac>
Tọghata PDF faịlụ ka iWork Pages na Microsoft Office akwụkwọ enweghị adịkwa Ọkpụkpọ na okirikiri nhọrọ ukwuu.
Gbalịa PDF Converter Pro for Mac>
Mfe na-Iji PDF decryption ngwá ọrụ Ị kpọghee ekwt echebe PDF faịlụ na Mac OS X odum na Mountain odum.
Gbalịa PDF Password Remover for Mac>
Mfe na n'ụzọ zuru okè tọghata PDF faịlụ ka n'ụzọ zuru ezu-Ị na editable Okwu dọkụmentị na Mac.
Gbalịa PDF to Word for Mac>
Tọghata eBooks si PDF ka EPUB, ọkọlọtọ ebook format, maka ịgụ na iPad, iPhone na iPod aka.
Gbalịa PDF to EPUB for Mac>
Tọghata PDF faịlụ ka PowerPoint ngosi slides ngwa ngwa na effortlessly na Mac OS X.
Gbalịa PDF to PowerPoint for Mac>
Tọghata PDF tebụl n'ime n'ụzọ zuru ezu editable Excel spreadsheets ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi na Mac OS X.
Gbalịa PDF to Excel for Mac>
Wondershare PDFelement Maka Mac
Naghachi foto gị, vidiyo na ọdịyo faịlụ site na Mac na ndị ọzọ na mbughari nchekwa ngwaọrụ.
Gbalịa Photo Recovery for Mac>
The niile-na-otu dị ike, fun na mfe n'ụlọ video nchịkọta akụkọ nke Mac ka mmepụta elu-edu oru ngo.
Gbalịa Filmora maka Mac>
Mfe ike gị DVD na 90+ free DVD menus on Mac
Gbalịa DVD Creator for Mac>
Download online videos si 1000+ video nkekọrịta saịtị dị ka Youtube, Vimeo ma ọ bụ Dailymotion na gị Mac ma nụ ụtọ ha na ọ laa.
Gbalịa AllMyTube for Mac>
All-na-otu video ọkpụkpọ software na-arụ ihe niile i nwere na gị Mac. Enwe HD fim ugbu a na elu mma.
Gbalịa Player for Mac>
Video Editor for Mac - Get a ọkachamara-na-achọ nkiri na nkeji.
DVD Creator for Mac - Mepụta elu-edu DVD.
Wondershare TunesGo Ochie (Mac)
Full nnwere onwe nyefee music na listi ọkpụkpọ site na iPhone, iPad na iPod ka iTunes Library on Mac. Ofụri Esịt dakọtara na iTunes 12.1, iOS 9, ma na-akwado iPhone 6 & iPhone 6 Plus
Ka ahụghị njedebe gị?
Akwado Facebook Twitter Google
Bara uru Atụmatụ
Bupụrụ Mkpofu Iweghachite
SD Kaadị Iweghachite Software
Hichapụ Android Devices
Preview avaliable; Naanị-Gụọ, ọ dịghị data leaked
Afọ ahụmahụ NA data mgbake
Na-agba ọsọ na gị onwe gị na kọmputa na-aka site naanị gị
Nye data ngwọta dị ka gị mkpa
0 ụlọ ahịa
Easy & trendy video nchịkọta akụkọ na ọgaranya nzacha na ikwu n'ụzọ.
All-na-otu PDF ngwọta maka obere azụmahịa na n'ụlọ ọrụ.
Dr.Fone Maka iOS
The World # 1 iPhone, iPad na iPod aka data mgbake.
Video Ntụgharị Ultiamte
All-na-otu Video - Ngwọta Ụka, Download, Dezie, Ọkụ ...
Jikwaa, achọpụta na ịkọrọ gị music na ihe dị egwu na-akụ ngwaọrụ.
The World si 1st iPhone na iPad Data Recovery Software
The Best na Complete Iweghachite Software maka Computer & Nchekwa Devices.
1-Pịa na ekwentị ekwentị Nyefee
2. aha gị Review: * 3. Dee gị Review: Review apụghị ịbụ oghere.
* 4. Aha: aha nwere ike ịbụ oghere. * 5. Email: ghara ịdị irè e-mail. * 6. Captcha: ghara ịdị irè Captcha. *
Cheta na: Ọ bụrụ na ị nwere okosobode nsogbu ọ bụla na-eji ngwaahịa ma ọ bụ chọrọ n'okpuru echiche ọhụrụ na aro, biko kpọtụrụ anyị tech support ebe a.
Biko nyochaa gị nrubeisi
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị mgbanwe, pịa Dezie bọtịnụ n'okpuru. Ọ bụrụ na ihe niile bụ ihe ziri ezi, pịa nyefere button ịnọgide. Biko mara na mma reviews nwere ike buru 2-5 ahịa ụbọchị na-egosi na saịtị.
Ihe: Gị Review:
Product fim bụ maka:
Ikwu na ọdịnaya:
(Gị email agaghị egosi na ihe.)
Gaa Back nyefere
Daalụ maka ẹsụk gị nyochaa
ezi recard |
mbo mbuli mobile site Daniel
Olileanya m ga-esi m foto
Bụ nke a nyochaa-enye aka?
EE 0 NO 0
Bee si igwefoto kaadị n'amaghị site tami
Ndi enweghị ọtụtụ olileanya maka a software download nyere m aka naghachi photos na m bipuru nke kaadị naanị ka nwere ndị na "mado" ada. Nke a mere banyere 30 nkeji, gụnyere registration na zụọ, na bụ ọnụ ahịa ya. M naanị ya bụrụ na m hụrụ nke a mbụ ma zọpụta ndị nchekasị na obi mgbawa m nwere mgbe m chere ndị a nọ na-arahụ ihe ọma. Ga-ukwuu nwere ike ikwu.
ezi oké site Khalid
thanku niile m hụrụ n'anya nile
Ọdachi Iweghachite site Steve Martin
Nwere a 4 ụbọchị omume oge ịse ma chee na m depụtaghachiri niile foto anya nke otu onye, ​​dị mkpa, SD kaadị. Amama mgbe formatting ya na igwefoto, na m ama depụtaghachiri photos. Adịghị eji kaadị ndị fọdụrụ nke omume. Zụrụ Wondershare bụ ma nwee ike naghachi niile 981 foto site na SD kaadị. Zọpụta m butt!
Magburu onwe Product site G Rajesh Narayanan
N'anyasị ikpeazụ nwere a 5 hour oge ịse. Ehichapụ SD ọdịnaya site ndudue. Ekele a ngwá ọrụ, natara ọ bụla faịlụ enweghị ihe ọ bụla hastle. Jide ka iji.
Wondershare Photo Recovery Review site Daniela Rocha
M hụrụ n'anya ihe omume
M na-enwekwaghị olileanya site Rachel
M na-agbalị a "free ikpe" nke ụfọdụ ndị ọzọ mgbake software nke ahụ ga-eri a mma $ 80 na ọ bụghị naghachi ọbụna ọkara nke ihe omume a mere. N'ezie, pricey software natara naanị 201 faịlụ mgbe nke a natara fọrọ nke nta 1,500! Nke a bụ ọrụ ebube na a lifesaver. M nwere ụfọdụ dị mkpa foto na kaadị a na m ga-e bibiri ida. Daalụ otú ahụ, ukwuu otú ahụ!
Ebube, n'ezie site Drugo
-Adịghị atụkwasị obi yiri free softwares. Nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma ịba uru m na mgbe eji. Atụmatụ: -Complete: okụt nile Agbaghara media; -Secure: Mgbake bụ zuru okè, ọ dịghị emebi ma ọ bụ na-efu faịlụ; -Fast: Search na minit iri, mgbake nke 35 GB (foto, video, ọdịyo) na 38 nkeji. Na okwu ndị na-enweghị isi, dị nnọọ ekele unu maka a dị oke egwu software.
CHAỊ. Emeghị ọbụna mara nke a bụ na o kwere omume! Site Laura
OK ka ọ na-enyo m bụ nnọọ paranoid, adịghị m n'ezie ihichapụ ọ bụla dị mkpa photos m mere adịghị ama kwadoo si m SD kaadị, ma ... ha ha. M enweghị echiche ị pụrụ n'ezie naghachi ọ bụla nke gị na-ehichapụ faịlụ. Ọ dịkarịa ala ... abụghị a mfe! Na nke a bụ n'ezie ezi mara na faịlụ na-bụghị n'ezie na-adịgide adịgide ehichapụ n'ihi na m amakwa jijiji na-eche ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na onye hụrụ a "ide" disk m ... ọ nwere ike nakwa ihe niile m photos na ya, na nke a software dị. Abụ m onye na-amu amu photographer ma na-eme mgbe ụfọdụ boudoir eserese maka enyi, otú ahụ ka m ga-na ime ụdị ụfọdụ nke abụọ ihichapụ n'ọdịnihu, ma ọ bụrụ na m nwere onwe faịlụ (mkpa google otú ime na). Mgbe m na-emeghị n'ezie kwesịrị ime a mgbake mgbe niile, m na-kpam kpam bookmarking peeji a mere na ọ bụrụ na m chọrọ ime otú ahụ ga-eme n'ọdịnihu, nke a ga-mbụ m akwụkwọ. M ga-ijide n'aka na-ikwu na ọ ka ndị ọzọ. Unu na-egwu, ekele nke ukwuu! BTW m na mbụ gbalịrị ibudata software site na ụfọdụ ndị ọzọ na saịtị ma ọ bụ a zuru ezu n'efu nke 15 nkeji, faịlụ na apụghị oghe, na ndị ọzọ otu bụ na-akụda mmụọ ma unu bụ ezigbo dị ka silk !!! DAALỤ! Unu na-egwu.
Magburu onwe na mfe iji software site Sandeep
M na mberede ehichapụ niile foto site na ekwentị na m e bibiri dị ka ihe niile foto nke nwa m nwaanyị na-ehichapụ. Ma nke a software nyeere m aka naghachi niile foto na dị nnọọ ala. na-eso ntụziaka na ọ bụ mpempe achicha. Daalụ maka ebube software.
Na Mbụ 1 2 3 4 5 Next
Ịnọ ná Ntụkwasị
Anyị kpọrọ nzuzo gị na chebe gị ego na onye data na zuru izo ya ezo na elu wayo nchebe.
Mara nnọchiteanya dị inyere gị aka site nzi ndụ chat - ọ bụla oge nke ụbọchị ma ọ bụ n'abalị.
Ego na-azụ na-ekwe nkwa
Gbalịa tupu ị zụrụ na a free ikpe - na ọbụna mgbe gị zụọ, ị ka na kpuchie site anyị ụbọchị 30 nkwa.
WONDERHSARE-atụ aro Ngwaahịa
Naghachi faịlụ na 550+ formats site na kọmputa gị nchekwa ngwa ngwa, n'enweghị kpam. Mụtakwuo
4 ụdịdị naghachi furu efu ma ọ bụ ehichapụ faịlụ site na Mac ngwa ngwa, n'enweghị nsogbu na juputara. Mụtakwuo
Naghachi foto gị, vidiyo na ọdịyo faịlụ site na Mac na ndị ọzọ na mbughari nchekwa ngwaọrụ. Mụtakwuo